Nna a Wɔde Bɔɔ Ade: Bere Bɛn Na Onyankopɔn Fii Ase Bɔɔ Ɔsoro Ne Asaase?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Batak (Toba) Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinamwanga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Faroese Fijian Finnish Fon French Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Javanese Kabuverdianu Kannada Kikongo ya Leta Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kyangonde Lari Lingala Lithuanian Luganda Luo Malagasy Malay Malayalam Mashi Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Persian Pidgin (West Africa) Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Russian Sign Language Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Welsh Yoruba Zulu
Bible ankyerɛ bere a Onyankopɔn fii ase bɔɔ ɔsoro ne asaase ne bere dodow a ɔde bɔe. Nea ɛkae ara ne sɛ: “Mfiase no Onyankopɔn bɔɔ ɔsoro ne asaase.” (Genesis 1:1) Bere a Bible kaa “mfiase” no, ankyerɛ bere pɔtee no. Nanso wohwɛ sɛnea Genesis nhoma no kaa ɔkwan a wɔfaa so bɔɔ nneɛma nnidiso nnidiso no a, ɛma yehu sɛ, “mfiase” no bae ansa na “nna” nsia a Onyankopɔn de bɔɔ nneɛma no refi ase.
Nna nsia a wɔde bɔɔ ade no, ɛyɛ nna mmaako mmaako nsia a da biara yɛ nnɔnhwerew 24 anaa?
Dɛn na ɛkɔɔ so wɔ nna nsia a wɔde bɔɔ ade no mu?
Nea Genesis nhoma no aka no, ɛne nyansahu hyia anaa?
Bere bɛn na wɔbɔɔ owia, ɔsram, ne nsoromma?
Sɛ yɛhwɛ nea Bible aka a, asaase no adi mfe sɛn?
Daabi. Sɛ Bible ka “da” a, etumi kyerɛ bere tenten bi. Nea wɔreka ho asɛm no na ɛbɛkyerɛ bere no tenten. Sɛ yɛbɛyɛ nhwɛso a, bere a Bible reka bere tenten a Onyankopɔn de bɔɔ ade nyinaa ho asɛm no, ɛkaa wɔ baabi sɛ ɛyɛ “ɛda.”—Genesis 2:4.
Onyankopɔn maa asaase a na ɛda hɔ “kwa a wunhu n’adeban” no sesae, na ɛbɛyɛɛ baabi a nnipa ne mmoa betumi atena. (Genesis 1:2) Afei Onyankopɔn bɔɔ nnipa ne mmoa guu so. Nna nsia anaa bere tenten a Onyankopɔn de bɔɔ ade no, Bible ma yehu nneɛma a ɔyɛe wɔ emu biara mu.
Da 1: Onyankopɔn maa hann hyerɛn asaase so, na ɛma yebenyaa adekyee ne adesae.—Genesis 1:3-5.
Da 2: Onyankopɔn maa ewim baa nsu ntam, anaa ɔpaee nsu mu ma ebi kodii soro na ebi kaa fam.—Genesis 1:6-8.
Da 3: Onyankopɔn maa asaase kesee bae. Ɔsan maa nneɛma fifii asaase so.—Genesis 1:9-13.
Da 4: Onyankopɔn maa owia, ɔsram, ne nsoromma yii wɔn ho wɔ wim maa emu biara hyerɛnee asaase so.—Genesis 1:14-19.
Da 5: Onyankopɔn maa abɔde a nkwa wom baa nsu mu, na ɔmaa ntuboa nso bae.—Genesis 1:20-23.
Da 6: Onyankopɔn bɔɔ mmoa a wɔnam asaase so ne nnipa.—Genesis 1:24-31.
Bere a da ɛto so nsia no baa awiei no, Onyankopɔn homee anaa ogyaee adebɔ.—Genesis 2:1, 2.
Asɛm a Bible aka afa sɛnea wɔbɔɔ wiase ho no, amfa abɔde mu nyansahu mu nsɛm ankyerɛkyerɛ mu ankɔ akyiri. Mmom, Bible kyerɛɛ adebɔ no mu wɔ ɔkwan bi so a, wɔn a na wɔte ase bere a wɔrekyerɛw Bible no mpo betumi ate ase na wɔahu sɛnea wɔbɔɔ nneɛma nnidiso nnidiso. Adebɔ ho nsɛm a ɛwɔ Bible mu no ne abɔde ho nyansahu a edi mu hyia. Okyinnsoromma ho nimdefo Robert Jastrow kyerɛw sɛ: “Sɛnea Genesis nhoma no akyerɛkyerɛ nsɛm mu ne sɛnea okyinnsoromma ho abenfo kyerɛkyerɛ mu no, nsonsonoe da ntam, nanso nea ehia paa wɔ asɛm no mu de, ne nyinaa yɛ pɛ; sɛnea nneɛma kɔɔ so nnidiso nnidiso kosii sɛ nnipa bae no, ne nyinaa fii ase prɛko pɛ wɔ mmere pɔtee bi mu.”
Ná owia, ɔsram, ne nsoromma wɔ hɔ dedaw. Ɛka “ɔsoro” a Onyankopɔn bɔɔ no “mfiase no” ho. (Genesis 1:1) Nanso, ɛbɛyɛ sɛ na owia, ɔsram, ne nsoromma no hann ntumi nhyerɛn asaase so, efisɛ na biribi a ayɛ sɛ kuntu asiw kwan ama asaase so ayɛ sum tumm. (Genesis 1:2) Enti ɛwom sɛ da a edi kan no, hann baa asaase so, nanso na wuntumi nhu baabi a hann no fi. Ɛda a ɛto so nnan no, ɛbɛyɛ sɛ ade a asiw hann no kwan no mu buei. Bible ka sɛ, owia, ɔsram, ne nsoromma ‘hyerɛnee asaase so.’ Ɛbɛyɛ sɛ, sɛnea obi wɔ asaase so a obehu no no, saa na Bible kaa no.—Genesis 1:17.
Bible nka mfe a asaase no adi. Nea Genesis 1:1 ka ara ne sɛ, ɔsoro ne asaase a yɛn ani tua yi wɔ mfiase. Saa asɛm yi ne nhwehwɛmu a edi mu a nyansahufo ayɛ hyia, na ɛne nsɛm a nyansahufo aka afa mfe a asaase adi ho no hyia.
Share Share Bere Bɛn Na Onyankopɔn Fii Ase Bɔɔ Ɔsoro Ne Asaase?
ijwbq asɛm 173